Kushambadzira Matende Fekitori | China Kushambadzira Matende Vagadziri uye Vatengesi
Tende yedenga, inonziwo marquee uye gazebo, chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya. Inoratidzira hombe yekudhinda saizi uye yakajairika graphic, kushambadzira matende canopies zvirokwazvo ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekukuita kuti ubude kubva muchaunga, zvisinei chingaitirwa zviitiko zvemukati uye zviitiko zvekunze, senge zvekushambadzira, mapato, zviitiko zvemitambo kana zviitiko zvekunze zvekunze.
Yakashongedzerwa nemhando yepamusoro tende furemu, matende edu ekushambadzira anogona kuvimbisa kudzikama kunyangwe mune imwe diki mhepo ine mhepo. Yakakwana kune ese marudzi ese emukati uye ekunze mashandisiro, angave ari ekutengesa show, chiratidziro, yemitambo chiitiko kana nyowani chigadzirwa kuvhurwa. Kunze kwezvo, yakasarudzika bhegi vhiri inoita kuti kit kititi ive nyore kutora kwese kwese.
Iyo 10 × 10 yekushambadzira tende kana pop up tende ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa ekuratidzira mhinduro kune angangoita ese marudzi ezviitiko uye zviitiko.
Tende yepamusoro inodhindwa uye yakasonerwa 600D Polyester. Yedu dhayi sublimation yakadhindwa pamusoro petende inogona kuve nechokwadi kuti iwe wakajeka uye wakasviba ruvara. Kana iwe uchida kuve wakasarudzika pakati peyekutengesa show booth, iwe zvechokwadi unoda tsika yekushambadzira tende.